Fa maninona ny alikako no manala ny tenany ao an-trano? | Tontolo alika
Fa maninona ny alikako no manala ny tenany ao an-trano?
Anthony Carter | | Training, Puppies, Alika ankapobeny
"Mety hividy alika tena tsara ho anao ny vola, fa tsy hovidinao ny rambony."
Henry Wheeler Shaw, Comedianina amerikana.
Iray amin'ireo olana mahazatra indrindra izay ananan'ny tompona alika bebe kokoa amiko, dia ilay biby mitsika sy mivoaka anaty rano ao an-trano. Inona koa, 80% ny mpanjifako matetika no manontany ahy izany karazana fanontaniana izany amin'ny fivoriana voalohany. Ary eo no manomboka ny asa miaraka amin'izy ireo.
Androany dia ho hitantsika izay lesoka lehibe ataon'ny olombelona matetika rehefa manandrana mampianatra ireo alikantsika zavatra tena ilaina izy. Raha tsy misy resaka intsony, avelako ianao hiditra “Fa maninona ny alika no manamaivana ny tenany ao an-trano?”. Manantena aho fa tianao izany.
Matetika ny tompona biby dia mihevitra zavatra tena zava-dehibe fa ny biby dia manaja ny atin'ny tranony, ny tranony, ary tsy mamela ny zavatra feno urine sy fametrahana azy, olana iray izay antony lehibe mahatonga ny fisarahana amin'ny namantsika akaiky indrindra, Satria izy no safidy lehibe raisin'ny tompon-trano eo amin'ny sehatry ny mpampiasa, iantsoantsoana sy iakiany azy, vao mainka io manasarotra ny toe-javatra, ary mahatonga ny fatorana ara-pihetseham-po amin'ilay namantsika akaiky indrindra ho simbaina noho ny andaniny roa, ka mahatonga anay hanala ilay biby ny tenan'izy ireo amin'ny fihetseham-po ratsy amin'ny fahasosorana sy fahatezerana, izay raha tsy haintsika ny mitantana azy ireo dia hiafara amin'ny fandefasana ilay alika, izay hanjary fihetseham-po manimba amin'ny fianarana toy ny tahotra, izay zavatra tsy maintsy ataontsika antoka fa ny alika avy amin'ny alika kely tsy hanandrana mihitsy. Eo amin'ny fidirana, Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga antsika olombelona, hahita fampahalalana bebe kokoa momba an'ity lohahevitra ity ianao. Aleo aloha hanomboka amin'izay zava-dehibe.
1 Ny tsy fahombiazana mahazatra indrindra
1.1 Tokony ho olombelona ianao ...
1.2 Ny fomba fampianarana maloto sy tsy mahomby indrindra hatramin'izay
1.3 Puppy dia zazakely
1.4 Mangataka be loatra ve isika? Eny, betsaka…
2 Fa maninona ianao no miondrika ao anaty fa tsy eny an-dalana?
2.1 Fomba samihafa tsy fahombiazana
2.2 Mianatra manao zavatra
2.3 Andao ampio ny fihenjanana amin'ny fampitahana
2.4 Ny tsy rariny ataon'ny olombelona
2.5 Ny zanako kely dia mitovy tanteraka amin'ny zazakely
3 Fa inona no azoko atao Antonio?
3.1 Tsy misy fanafody an-trano
3.2 Miresaka momba ny fanamboarana azy
Ny tsy fahombiazana mahazatra indrindra
Tokony ho olombelona ianao ...
Matetika ny olona dia lasa tompon'ny alika (na ny alika tompontsika, imbetsaka tsy fantatrao hoe aiza no misy ny tsipika. Vidiny ...) raha tsy ampahafantarinao kely aloha ny momba ny fomba fiasan'ny sain'ny olona. ho namantsika akaiky indrindra (ary tokony ho sakaizantsika akaiky indrindra isika) na ny fomba hitondrana sy hanabe azy toy ny alika kely, zavatra ifotony raha irintsika ho falifaly izy.
Ny fahazazan'ny alika dia manan-danja toy ny an'ny zanak'olombelona, ​​ny vanim-potoanan'ny fitomboany izay mandeha hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 6 volana dia manan-danja manokana. Io vanim-potoana io dia hitoviana amin'ny ankamaroan'ny olona (miaraka amin'ireo fiovana fanta-daza eo amin'ny foko sy ny habeny) ary ny vanim-potoana fitomboana izay manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 12 taona amin'ny zanak'olombelona.
Ny kolontsaina malaza momba ny alika dia mamporisika antsika hampianatra azy amin'ny fomba mitovy izay nampianarina antsika tamin'ny ankamaroan'ny tranga, tamin'ny alàlan'ny fanalam-baraka sy ny sazy am-bava ary ara-batana, izay tsy nahitana vokatra tsara teo amin'ny olombelona, ​​tsy ho hafa izany amin'ny biby, ary mihoatra ny zavatra hafa rehefa tsy mahatakatra zavatra toa antsika izy ireo.
Ny fomba famoretana fihetsika na fitondran-tena amin'ny alàlan'ny herisetra dia mety hitarika antsika hanamafy ny fihetsika fotsiny, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia miteraka olana bebe kokoa ho an'ny alika, izay mitarika olana bebe kokoa ho antsika.
Ny fomba fampianarana maloto sy tsy mahomby indrindra hatramin'izay
Matetika aho manontany amin'ny mpanjifa ny fomba nanandramany nampianatra ny alikany hanamaivana ny tenany teny an-dalambe, Nolazainy tamiko fa mampiasa ny fomba taloha sy diso amin'ny fikosehana ny vavon'ilay biby amin'ny urine na fivalanana izy, manome azy tsiro mandritra ny fisentoany, ary ho famaranana farany, atokàny amin'ny famelana azy mihidy ao amin'ny efitrano iray na mitondra azy mankany amin'ny patio na lavarangana. Ary mazàna io olona io rehefa miteny amiko izy dia tsy manantena ahy hiteny aminy fa ny lesoka no tena izy ary ny andraikitra amin'ilay raharaha (izay tsy izy no diso) azy tanteraka. Betsaka no mandà izany amiko. Atokako ho azy ireo ity lahatsoratra ity.
Ity fomba ity dia tsy hoe tsy misy ilana azy amin'ny 1000% fotsiny (aza manadino, te-hanoratra arivo aho) fa ratsy ihany koa, azafady, ny tiako holazaina dia ny GUARRADA, ary ambonin'izany rehetra izany dia marika iray amin'ny tsy fahampiam-panahintsika raha ny amin'ny fanabeazana zavamananaina iray hafa. Raha ny safidintsika voalohany rehefa mampianatra zavatra manan-danja toy ny alika dia tsy mioty na mikotrika ao an-tranontsika, ny trano zaraintsika aminy, dia akanin-jaza toy izany, tokony mieritreritra an'io fotoana io isika raha manana ny ilàny hitarihana ny fiainan'olona iray izay miankina betsaka amin'ny tari-dalan'ny olombelona (izay ny fomba tiako hanehoana azy) amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny sakafo, hatramin'ny fivoahana amin'ny fiaraha-monina.
Ny alikakely dia mitovy tanteraka amin'ny zazakely. Tsy afaka izy ary tsy tokony hijoro hanamaivana ny tenany tontolo andro. Tsy azo atao ara-batana izany, ary noho ny antony mitovy amin'ny zaza. Mbola tsy vita ny vatany ary miforona ny hozatra. Tahaka ny tsy hilazanao zaza 3 taona hihazona ny tontolo andro raha tsy mikoty ianao, dia tsy afaka ary tsy mila alika kely na 3 volana.
Mila miditra anaty ianao manomboka amin'ny fotoana hikarakarantsika ilay biby, fa ny alikakely eo anelanelan'ny 2 sy 6 volana dia mila mitsika farafaharatsiny indray mandeha isaky ny 60 minitra. Raha tsy afaka mitantana an'io ianao dia aleo tsy manana alika. Na farafaharatsiny aza misafidy alika kely ho namana. Rehefa mandray alika 4 na 5 taona dia tsy sendra ireo olana ireo ny olona iray. Izay no antony tsy maintsy omena lanja ny safidy handray.
Mangataka be loatra ve isika? Eny, betsaka…
Ary ny olona iray izay tsy mbola nampiofanina na nampahafantarina, izay tsy mahalala afa-tsy ny lohahevitra iray saro-pantarina sy be dia be toy ny fampianarana kaninina, dia tsy mahalala izay takiny amin'ilay biby, rehefa miandry azy hihazona nefa tsy manamaivana ny tenany. mandritra ny ora maro hatramin'ny fahazazany.
Tsy misaintsaina matetika isika fa ny alika no biby fiompy tokana izay tsy maintsy mivoaka ivelan'ny tranontsika, trano iray izay azy ihany koa, mba hanaovana ny filan'ny vatana ara-batana.
Ny vorona, trondro, saka, guinea pig ary ny karazan'ireto karazana biby fiompy ananantsika ireto dia manana toerana ao anaty trano hanamaivanana ny tenany, raha Takianay ny hiandrasan'ny alika ary anaovantsika izany raha irinay (Raha fintinina izany), ary hatramin'ny fahazazany hatrany am-boalohany no anaovantsika izany. Toa tsy rariny loatra izany amiko. Ny marina.
Raha tena tia ny alikantsika isika, tsy maintsy miezaka izahay hanao ny fiainanao ho mora araka izay azo atao, ary koa ny fanakonana ny zavatra ilainao rehetra sy ny fampifanarahana tanteraka amin'ny fiarahamoninay. Izany dia ny fitiavana, tsy mandany tontolo andro hanome azy oroka sy famihina ary avy eo mamely sy mampijaly azy rehefa miala aina ao an-trano izy nefa tsy nanazava ny zavatra tadiavintsika amin'ny fomba azony. Izay no zava-dehibe, ary tsy mino fa tiantsika kokoa ny biby fiompintsika satria avelantsika hipetraka eo ambony sezalava izy.
Fa maninona ianao no miondrika ao anaty fa tsy eny an-dalana?
Fomba samihafa tsy fahombiazana
Mora tokoa ny mametraka an'io fanontaniana io, na izany aza tsy mora ny mamaly azy, ary tsy mora koa ny vahaolana. Tokony ho takatra hatramin'ny fotoana voalohany fa ny alika kely izay tsy ampianarina tsara, dia toa mbola hanohy mimi any an-trano. Ary izany no mahatonga ny biby fa miafara amin'ny arabe imbetsaka. Na mbola ratsy kokoa aza, ao amin'ny Zoo-Sanitary masirasira, pun tin.
Rehefa avy nilaza sy nahatakatra an'io isika dia andao hojerentsika ny fomba ianaran'ny alika amin'ny alika kely, ary avy eo ny tranga azo ampiharina izay hitako.
Mianatra manao zavatra
Ny alika dia mianatra amin'ny fomba tena tsotra, Ary ny fianaran'izy ireo dia mifototra amin'ny antsika, amin'ny tany mampihetsi-po, manome lanja ny zava-niainana vaovao ho "mahafinaritra" na "tsy mahafinaritra" ary mampifandray fihetseham-po aminy.
Rehefa "tsy mahafinaritra" ho azy ireo ny valin'ny fanombanana dia mazàna mampifangaro karazana fihetsem-po fototra 3 toy ny tahotra, hatezerana na fahasosorana. Ireo fihetsem-po ireo dia mazàna vokatr'izany amin'ny fampahavitrihana ny mavesatra ao aminy, mampihetsi-po ny rafi-pitabatabana mampihetsi-po, izay hahatonga ny sakaizantsika hamelombelona ny filàny ary hampitombo ny fihetsika rehetra, izay tsy dia mahasalama loatra araka ny eritreritry ny olona rehetra.
Izany no antony tsy maintsy hahatsapantsika fa manosotra ny tavan'ny alika kely 4 volana amin'ny fantsonan'ny mimi, hamelezana azy ary avy eo hanasazy azy, homeny azy ho zavatra tena tsy mahafinaritra izy io ary vokatr'izany, lavitra ny fananana alika nahita fianarana, dia hanana alika iray izay manomboka miaina fihenjanana hatramin'ny fahazazantsika indrindra ary izahay no ifantohana. Tsy dia mahasalama izany raha ny fifamatorana ara-pihetseham-po eo amin'ny tompona sy ny alika, ary tsy misy lanjany didaktika. Lozabe izany ary tsy maintsy hamaranantsika azy io.
Tsy azontsika atao mihitsy ny mampianatra ny alika amin'ny alàlan'ny milaza izay tsy tiantsika hataony fotsiny, ary tsy amin'ny famoretana ara-batana azy noho ny fanaovany ny filany voajanahary. Tsy hiteraka adin-tsaina fotsiny isika ary hiteraka olana lehibe kokoa.
Ny olana amin'ny fiankinan-doha amin'ny sazy ara-batana ho an'ny fanabeazana dia ny hany zavatra tokana izay miafara ampianarina an'ilay mpianatra dia ny famahana ny fifanolanana amin'ny alàlan'ny herisetra. Ary tsy mety amin'ny ankizy na amin'ny alika izany.
Ity no dingana voalohany tsy maintsy ovaina raha te-ho afaka hampianatra ny alikantsika hanala ny tenany eny an-dalambe isika. Tsy ny fanasaziana no anaovanao azy, fa valisoa ihany rehefa tsy nataonao.
Andao ampio ny fihenjanana amin'ny fampitahana
Tokony ho fantatrao hoe inona ny fizotran'ny alika maro rehefa tsy mahavita mifehy ny filany izy ireo, ary izany antony izany no mahatonga azy ireo tsy hijanona amin'ny fiaingany ao an-trano.
Raha ny mahazatra dia alika kely izay misaraka amin'ny reniny dia efa miatrika adin-tsaina. Matetika io fihenjanana io dia maharary ary matetika ny olona dia tsy miombom-pihetseham-po toa ny takian'ny toe-javatra, ary afaka manao fahadisoana lehibe isika, toy ny fiezahana hampianatra avy amin'ny sazy sy latsa, izay mitarika antsika hametraka azy amin'ny toe-javatra tsy ahafahany mitantana tsara, izay hiteraka loharanom-pahasahiranana azo antoka.
Rehefa kivy ny alika dia mihanaka bebe kokoa izy, Hatramin'ny alàlan'ny fisotrony dia manala ny ampahany amin'ny be loatra amin'ny hormonina miady saina izay ao amin'ny vatanao mandritra ny fihenjanana. Rehefa mihanaka bebe kokoa ianao dia mila rano bebe kokoa, ary arakaraka ny fisotroanao no mahararanao kokoa. Izany dia ho an'ny ilaina mba hahafahana mandanjalanja sy hahafahana miditra amin'ny toetry ny fitsaharana tsara.
Raha, ankoatry ny fizotran'ny adin-tsaina mahazo azy, dia vao mainka manampy trotraka izany izahay, manameloka azy, mivazavaza aminy ary manasaraka azy amin'ilay vondrona, raha tsy tena fantany ny antony, dia vao afaka manampy solika bebe kokoa amin'ny afo fotsiny isika, na ranon-javatra bebe kokoa amin'ny tatavia, araka ny itiavanao azy.
Betsaka ny olona manao izay mametra ny fahazoana misotro rano na maka azy mivantana. Fahadisoana lehibe. Hampitombo ny olana fotsiny izany, satria ny tsy fahazoana miditra maharitra amin'ny loharanon-karena ilaina ho azy ireo satria ny rano eo akaikin'izy ireo dia hiteraka fihenjanana bebe kokoa, noho izany dia mila rano bebe kokoa izy ireo hahafahana manafoana ireo hormonina miady saina be loatra ao amin'ny rany ary tsy manana an'io rano io dia hampitombo ny adin-tsaina, manomboka amin'izany ny loop izay tsy ho afaka hivoahan'izy ireo samirery ary izay biolojimia amin'ny vatanao dia misy zavatra betsaka azo lazaina.
Ny tsy rariny ataon'ny olombelona
Ankoatra ireo voalaza rehetra ireo dia tena tsy ara-drariny ny milaza aminao raha efa nanao ratsy ianao fa tsy rehefa manao tsara. Ary tena olombelona izany.
Izay manana alika, ary mailaka sy mahery vaika amin'ny fananarana azy amin'ny fikapohana azy ara-batana, dia tokony hanome valiny bebe kokoa ny alikany rehefa manao zavatra mifanaraka aminy ary mahafaly azy.
Ny mino fa ny biby dia tsy maintsy atao ambanin-javatra fa tompony isika ary mila mitady mandrakariva ny hampifaly antsika, dia mijaly amin'ny faniriana ho amin'ny fahalehibiazana izay akaiky kokoa ny fiaraha-monina misy mesianika, fa tsy hoe ny sakaiza akaiky indrindra sy sakaizan'ny biby mahatoky toa ny alika.
Ny zanako kely dia mitovy tanteraka amin'ny zazakely
Ianao ve dia hananatra zazakely vao 2 taona noho ny fivalanany? Mahita fahita amin'ny olon-kafa ve ianao raha manao izany? Mazava ho azy fa tsia. Zava-mahazatra sy maha-olombelona tokoa ny anihin-janantsika, satria miditra zavatra voajanahary ao anatin'ny fivoarany izy raha vao teraka. Ny anatomia azy dia tsy mivoatra tanteraka, ary ny tatavia sy ny sphincter dia tsy azo tazonina. Tsy maintsy miala matetika ianao. Zavatra voajanahary araka ny nolazaiko teo aloha. Eny, amin'ny alika kely dia mitovy mihitsy izy io.
Tsy ny fananarana azy fotsiny no tsy misy ilana azy satria tsy fantany tsotra izao fa tsy mety izany na tsy tianao hataony izany, ary ny fanehoana azy amin'ny herisetra dia tsy hahatonga azy hahalala haingana kokoa na haingana, dia hahatonga azy fotsiny enta-mavesatra amin'ny adin-tsaina ary izany dia hahatonga azy ireo tsy hanana ahiahy bebe kokoa, rehefa mikarakara fihetseham-po manimba toy ny hatezerana, fahasosorana na tahotra hatramin'ny mbola kely. Izay tsy mifanaraka amintsika na kely aza.
Inona no takatra tsara kokoa ankehitriny satria zavatra maharikoriko ny atao, manosotra ny orony noho ny filany ary mibedy azy eny ambony?
Raha efa azonao izany dia mbola misy fanantenana ho an'ny alikanao. Fa, Vakio indray ity lahatsoratra ity hatramin'ny voalohany.
Fa inona no azoko atao Antonio?
Tsy misy fanafody an-trano
Tsy maintsy ataonao anaty izany. Tsy misy fanafody an-trano. Tsy misy hafetsena na teknika na tetika mora manampy antsika hanakana ny alikay tsy hikorontana sy hitsika ao an-tranonay, izay azy izany.
Ary tsy tokony ho meloka izy ireo na hahatonga antsika hanana karazana fihetseham-po ratsy manodidina ilay alika kely fotsiny, hampihena ny fatorana ara-pientanam-po miaraka aminy, izay manala baraka ny andaniny roa miaraka. Ary izany no tena tsy tadiavintsika.
Miresaka momba ny fanamboarana azy
Eny, satria lohahevitra midadasika be io dia nanapa-kevitra ny hisambotra azy amina lahatsoratra roa aho, ity voalohany ity izay miresaka momba ny tsy fahombiazana mahazatra sy ny lafiny samihafa, izay ezahako hatao mazava ny zavatra tena fototra toa an'io ny alika dia zazakely (raha tsy mbola naheno momba an'io ianao dia andao handeha diso), fa ny herisetra ara-batana na am-bava dia tsy fanabeazana ary mety ho fanontaniana iray momba ny olan'ny fitondrana vohoka ny olombelona, ​​ny amin'ny toe-javatra misy azy.
Izany no antony anasako anao amin'ny lahatsoratra manaraka izay handaozako anao amin'ny herinandro ambony., ato amin'ity pejy alika tianao ity, ary izany dia hitondra ny lohateny voafaritra hoe "Ahoana ny fomba hampiatoan'ny alikako ny fisotrony ao an-trano". Aza adino izany.
Tsy misy fiarahabana bebe kokoa ary hatramin'ny herinandro ambony. Karakarao ny alikanao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fa maninona ny alikako no manala ny tenany ao an-trano?
azumi dia hoy izy:
Tamin'ny farany dia maro no tsy tokony omena ary tsy misy vahaolana mety. Namaky ny zava-drehetra aho mba tsy ho feno ny valiny. Nasaiko naseho azy koa ny pookany sy ny fihantsiana nataony rehefa tsy nanao taratasy izy. Ankehitriny dia any ivelany na raha avy ny orana dia atao an-taratasy izany. Ary ny zavatra misy dikany ho an'ny tsirairay dia ny tonon'ilay feo: mamy raha toa ka misy zavatra tsara ary mifandraika amin'ny fampiroboroboana sy matanjaka raha te hihaino azy ianao. Ary ireo fotoana nahavoa ahy mihorakoraka aho fa maharary ahy mihoatra ny coker fa azony ny hevitra. Ary ny biby fiompy faharoa nobeaziko toy izao ary hita fa tsara, Maltese kely ilay iray.
Valiny tamin'i Azumi
Anthony Carter dia hoy izy:
Voalohany indrindra misaotra anao naneho hevitra.
Mamaly anao amin'ny ampahany aho. Raha mamaky ilay lahatsoratra indray ianao, amin'ny farany dia asehoko fa ao anatin'ny herinandro dia hisy lahatsoratra iray hafa mitondra ny lohateny hoe "Ahoana ny fomba hampiatoana ny alikako tsy hikorontana ao anaty trano", izay amaritako ireo teknika sy vahaolana mahomby sy tsy mahery setra ny fomba fanabeazana alika kely sy alika olon-dehibe tsy hanamaivana ny tenany ao an-trano. Lohahevitra be dia be izy io ary naleoko nanokana ampahany roa ho azy. Ity tapany voalohany ity dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana ny ara-batana (vatana biokimia), ny antony ara-tsaina sy ny saina izay misy fiantraikany amin'ity lohahevitra ity.
Avy eo momba ny fomba fiasa mahery setra miaraka amin'ny biby ho anao, lohahevitra tsy ekeko mihitsy izany, ary mitovy amiko, ny ankamaroan'ny mpanabe sy ny etolojia. Tahaka ny tsy ahafahanao mamono zazakely olombelona, ​​ny fikapohana zazakely alika, ankoatry ny tsy fananana dikany azo ampiharina, dia tsy fantatrao izay ataonao. Ny herisetra no loharanon-karena voalohany ho an'ireo izay tsy mahalala izay ataony rehefa manabe.
Ary tsy milaza izany aho satria tiako izany, fa kosa zavatra iray nohalalinina mandritra ny fiomanana amin'ny ETHOLOGY.
Na izany aza, ny fiofanana an-taratasy sy ny fanitsiana ny feo dia toa niasa taminao. Mazava ho azy, satria natambatrao tamin'ny sazy ara-batana sy fifandonana izy, dia tsy ho azonao tsara izay niasa ho anao sy izay tsy.
Ary farany, rehefa mikapoka alika ianao dia tsy mahazo zavatra hafa ny alika hafa noho ny hoe manana olona eo akaikiny izy izay mampijaly azy amin'ny toe-javatra sasany. Tsy izany no fomba fanabeazana.
Ny herisetra amin'ny fanabeazana, na amin'ny olona, ​​soavaly na alika, dia zavatra tsy misy ilana azy tokoa, satria amin'ny maha-fiarahamonina misy fihetsem-po sy fihetseham-po antsika dia mirona handà ny hafatry ny olona iray izay mahatonga antsika hahatsiaro ho ratsy isika, ary tsy afaka hianjera amin'izany ianao. tsara amin'ny alikanao raha mamely azy ianao.
Imbetsaka aho no mihaona amin'ny mpanjifa (mpanazatra kanin aho, mpampiofana manokana ary mpahay sakafo efa an-taonany maro sy efa za-draharaha, izay niarahako niasa tamin'ny alika maro, azonao atao ny miditra amin'ny tranokalako na ny fantsona YouTube ahy raha te hahalala ny asako ianao). alika tsy miraharaha na manafika.
Ary izany dia satria nokapohina sy nanararaotana toy ny alika kely.
Indray mandeha dia nanontany ahy ny mpanjifa iray hoe maninona ny alikany no tsy niaro azy tamin'ny ady. Nanontaniako izy raha nokapohiny ary hoy izy hoe, nokapohiny ho soa izy ary hampianariny. Ary novaliako izy fa nampianatra azy tsara aho ary ny alika tsy mahita afa-tsy loza eo amin'ny tontolo iainana, natahotra ny fahamendrehany izy ary nandositra. Izay no tratra amin'ny herisetra amin'ny fanabeazana.
Ary mety ho ratsy kokoa izany.
Mety hanaikitra azy izany.
Ny fanabeazana dia zavatra sarotra be atao nefa tsy misy fotony mirindra ary tsy fantatrao izay hatao, ary afaka mianatra manao zavatra tsara kokoa ianao, ary ambonin'izany rehetra izany dia manaja ny fihetsem-po sy ny fihetseham-pon'ireo namantsika akaiky indrindra.
Raha manana fanontaniana ianao dia valiako tamim-pifaliana ianao, na izany aza aza kitiho izy ireo hanabe.
Tsy mandeha izy io.
Valiny tamin'i Antonio Carretero
Irma Galvez dia hoy izy:
Misaotra anao voalohany, nampahafantatra anay fa tsy mitovy izahay. Misaotra anao ihany koa noho ny nampahafantarinao ahy fa zazakely ampianariko izy. Manantena aho fa hahita ny lahatsoratrao manaraka.
Valiny tamin'i Irma Galvez
Salama, manana PPP 7 volana aho ary monina ao amin'ny firenena. Tonga izy ary mandeha rehefa tiany fa aleony ao anatiny no tiany. Isaky ny alina alohan'ny hatoriako dia entiko mivoaka kely izy hizaha raha manamaivana ny tenany izy ary miaraka aminy mihitsy aho satria raha tsy izany dia miandry eo am-baravarana izy miandry. Na izany aza dia vitako izany satria isaky ny alina dia mivoaka mitsika sy mivoaka any amin'ny efitrano fisakafoanana sy lakozia izy. Nanova ny ora fisakafoanana aho talohan'ny nanomezako azy tamin'ny alina ary izao maraina. Tena kivy izahay satria miharatsy hatrany hatrany. Manana alika roa hafa aho matory ao amin'ny kennels ao ivelany ary iray hafa kely izay matory amin'ny iray amin'ireo zanako vavy. Mila fanampiana aho azafady
Salama, ny alikako dia herintaona, ary mandondona amin'ny alina aho dia mandeha aminy in-4 isan'andro ary tsy misy fomba hikarohany any ivelany, manana alika 10 taona iray hafa aho ary mandeha mitsangantsangana foana izy, miondrika sy poops any ivelany izy mijery fa tsy manja ary tsy hitako intsony izay hatao
Fito volana ny alikako, nianatra nanao izany tany ivelany izy ary tamin'ny rakipeo nampiofana azy, nandany fotoana be dia be aho satria miasa any an-trano aho ary miaina irery, entiko mivoaka an-tongotra lavitra any amin'izay alehany, misakafo tsara, manana ny zava-drehetra ary faly, miara-milalao aminy aho, fa tato ho ato dia miditra ao anaty trano izy mba hikosehana, afaka any ivelany izy ary tsy te hanao ary rehefa miditra sy miaraka aminy aho dia mikotraka ao an-trano ary mikiaka koa, marina dia mahatonga ahy haniry hanome azy io, satria manana ny zava-drehetra izy ary tsy azoko hoe afaka manao zavatra bebe kokoa ho azy aho. Raha efa nianatra nanao ivelany izy, inona no mahazo azy? Tsy mety voky na inona na inona izy, toa marary saina. Misy fomba fanamboarana azy ve?
Valiny tamin'i Lilia
Famahanana alika mandeha ho azy ho an'ny alika, eny sa tsia?
Ahoana ny fomba hisafidianana ny vozon'akanjo tsara indrindra ho an'ny alika